Gosiri! Enwere ike igbu ụzarị coronavirus site na ụzarị ultraviolet na 30s. 99.9%
Akwụkwọ akụkọ coronavirus (COVID-19) gburu nke ọma na 30s site n'aka Seoul Viosys na SETi na Seoul, Korea, nke Violeds SETi kwupụtara na nso nso a. Ndi National Health Council weputara akwukwo a coronavirus pneumonia treatment plan (ikpe 7) nke ndi National Health Council weputara ma gosiputa na oria ultraviolet nwere ike ...
Gosiri! Ngwunye robot na-egbu disinfection nwere ike inactivate coronavirus ọhụrụ
Coronavirus ọhụrụ a juru ebe niile n'ụwa, nke na-eyi egwu nchekwa na ahụike nke mmadụ. Na mgbakwunye na ọgwụ mgbochi ọrịa, enwere ụzọ dị ngwa ma dị irè iji gbuo coronavirus ọhụrụ ahụ? Pulse disinfection technology egosila na ọ nwere ike igbu MRSA ...
Kacha ọhụrụ na-eme nnyocha: ọhụrụ coronavirus nwere ike ịlanarị na ihu nke nkpuchi maka ụbọchị 7! Ọgwụ mgbochi kwa ụbọchị dị mkpa
E bipụtara akwụkwọ akụkọ coronavirus na lancet site na Stability of SARS-CoV-2 dị iche iche gburugburu ebe obibi na nso nso a. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-egosi na oge nlanarị nke coronavirus ọhụrụ ahụ nwere ike iru ụbọchị 7 na mpụga nkpuchi ahụ, nje ahụ kwụsiri ike n'ụkpụrụ pH dị iche iche na ọnọdụ ụlọ ...